ရခိုင်ပြည်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် | Ko Rohingya
A Short History of Arakan & Rohingyas
ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ သမိုင်းမသိရင် အတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာ အလွန် ပြောင်မြောက်တယ်လို့် ပညာတတ် လူယဉ်ကျေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရော၊ ပညာတတ် လူယုတ်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာရော အလွန်ပင် ခေတ်စားလှပါတယ်။ သမိုင်းမသိရင် အ ယုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်းပါတယ်။ ပင်းပါတယ်။ လူကို လူလို မမြင်တတ်တော့ပါဘူး။ တိရိစ္ဆာတစ်ကောင်ကို သတ်ရင် အလွန်ပင် အပြစ်ငရဲကြီးလှတယ်၊ သံသရာမှာ ၀ဋ်ခံရမှာကြောက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ၊ ဘာကြောင့် အပြစ်မဲ့ လူသားတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြရတာလဲ။ သမိုင်းကို မသိကြတဲ့အချက်တစ်ချက်လဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူမျိုးဟာ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်၊ အရေးအခင်းဖြစ်အောင် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ လုံ့လစိုက်ထုတ်၊ လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန် အေးမောင်နဲ့ ၎င်းရဲ့မိစ္ဆာအပေါင်းအပါတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။
လူတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်ကတော့ ကိုယ့်မှာ အသိပညာမရှိတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေ မပြုဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်မသိလို့ မရှိဘူးလို့လည်း မပြောပါနဲ့။ သမိုင်းဆိုတာ လိမ်လို့မရပါ။ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းမဟုတ်။ ဒီလိုပါပဲ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေဟာလဲ သမိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင် နေ၀င်းရဲ့ သမိုင်းလိမ်မှု၊ သမိုင်းဖြောက်မှုတွေကြောင့် ကျောင်းပြဌာန်းစာအုပ်တွေမှာတောင် မမှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပါရှိနေတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာသန်းထွန်းက အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပြီး သေအံ့ဆဲဆဲဖြစ်နေသူတစ်ဦးက လိမ်မှာရစ်ကြပါလို့ မှာနိုင်မယ်မထင်ဘူးလို့ လှောင်ပြောင် ကဲ့ရဲ့ထောက်ပြထားတာကို ဆရာရေးသားခဲ့တဲ့ ငါပြောချင်တဲ့ ငါ့အကြောင်း စာအုပ်ငယ်လေးမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီ“ရခိုင်ပြည်နှင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသမိုင်း အကျဉ်းချုပ်”ဆိုတဲ့ သမိုင်းစာအုပ်ငယ်လေးဟာ စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်နေ၀င်းရဲ့ မဆလ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီခေတ်တုန်းက တရားဝင် ပါတီတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ “အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ”ကနေပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ပြည်တွင်းမှာ စာပေကင်ပေတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းဖန်တီးထားတဲ့ စာပေစိစစ်ရေးတင်ပြီး တရားဝင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီ “အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ”ဟာ အခုလက်ရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ရဲ့ လက်ထက်မှာ မှတ်ပုံပြန်တင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မမြင် ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်ပမှာပဲ အဝေးရောက်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်လျှက်ရှိနေပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ ယခု ဖော်ပြထားသည့် စာအုပ်၏ မျက်နှာဖုံးမှာ အသစ် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on February 7, 2013, in ရိုဟင်ဂျာ, သမိုင်း and tagged ချမ်းမြေ့, စစ်အာဏာရှင်, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဗိုလ်နေ၀င်း, ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရိုဟင်ဂျာ, သမိုင်း, အစ္စလာမ်, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဘွရှင် (ခ) မြတ်သိန်းထွန်းအား ချေမှုန်းခြင်း (၃)	Rakhine Racist and Extremist; Dr Aye Chan →